Voafidin'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Voafidy avy amin'Andriamanitra
Izay rehetra efa voafidy tamina ekipa nandray anjara tamin'ny lalao na zavatra misy fiantraikany amin'ny mpilatsaka hafa dia mahafantatra ny fahatsapana voafidy. Manome anao hahatsapa fa tiana sy ankasitrahana. Etsy ankilany, fantatry ny ankamaroantsika koa ny mifanohitra amin'ny tsy fidiana voafidy, tsapanao fa tsy miraharaha sy nolavina.
Andriamanitra, izay nanao ny maha-izy antsika sy mahatakatra ireo fihetseham-po ireo, dia manantitrantitra fa ny nifidianany ny Isiraely ho olony dia nodinihina tsara ary tsy tongatonga ho azy. Hoy izy tamin’izy ireo: “Fa firenena masina ho an’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo, ary ianareo efa nofidin’i Jehovah ho olony amin’ny firenena rehetra ambonin’ny tany.” ( Deoteronomia 54,2). Ny andininy hafa ao amin’ny Testamenta Taloha koa dia mampiseho fa Andriamanitra no nifidy: tanàna iray, mpisorona, mpitsara, ary mpanjaka.
Kolosiana 3,12 ary 1. Thes. 1,4 dia manambara fa isika koa, tahaka ny Isiraely, dia voafidy: “Fantatray, ry rahalahy malalan’Andriamanitra, ny amin’ny fifidianana anareo (ho an’ny olony). drafitra, izay rehetra ataony dia atao amin’ny fikasana sy ny fitiavana ary ny fahendrena.
Ao amin'ny lahatsoratro farany momba ny maha-izy antsika ao amin'i Kristy, dia nametraka ny teny hoe "mifidy" eo am-pototry ny hazo fijaliana aho. Zavatra inoako fa ampahany fototra amin'ny fahafantarana hoe iza isika ao amin'i Kristy ary tena ilaina amin'ny fahasalamana ara-panahy koa. Raha mandehandeha amin’ny finoana fa noho ny sitrapon’Andriamanitra na ny horonan-daoka no nahatongavantsika eto, dia ho malemy ny finoantsika (fitokisana) ary hiharatsy ny fivoarantsika amin’ny maha-Kristianina matotra antsika.
Isika tsirairay avy dia tokony hahalala sy mino fa Andriamanitra dia nifidy antsika ary niantso antsika tamin'ny anarany. Izy dia namihina azy sy izaho teo an-tsorony ary niteny hoe: "Hifidy anao aho, araho aho!" Afaka matoky isika fa mahalala fa Andriamanitra no nifidy antsika sy tia antsika ary manana drafitra ho antsika tsirairay avy.
Inona no tokony hataontsika amin'ity fampahalalana ity ankoatra ny fahatsapana hafanana sy mafana? Fototry ny fiainantsika kristianina izany. Tian’Andriamanitra ho fantatsika fa azy isika, tiana, tadiavina, ary ny Raintsika no mikarakara antsika. Saingy tsy hoe satria nanao na inona na inona izahay. Araka ny nambarany tamin’ny Isiraelita ao amin’ny bokin’i Mosesy fahadimy 7,7 Hoy izy: “Tsy noho ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra no nitsirian’i Jehovah anareo ka nifidianany anareo; fa ianao no ambany indrindra amin’ny firenena rehetra. Satria tia antsika Andriamanitra, dia afaka miteny toy izao miaraka amin’i Davida isika: “Nahoana ianao no malahelo ny tenanao, ry fanahiko, ary miodina ato anatiko ianao? Miandrasa an'Andriamanitra; fa hidera Azy aho fa famonjena ahy sy Andriamanitro Izy » (Salamo 42,5)!
Satria voafidy isika dia afaka manantena ho azy, midera azy ary matoky azy. Avy eo isika dia afaka mitodika any amin'ny hafa ary manome taratra ny fifaliana ananantsika ao amin'Andriamanitra.